पूर्वको पर्यटनको गेटवे सिटी हो इटहरी
२४१६ पटक पढिएको
इटहरीको होटल प्रिमियर, प्रिमियर होटल स्कुल र इटहरी बेंक्वेटलगायतका होटल तथा हस्पिटालिटीका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी रूपमा सक्रिय भुसालले आफ्ना होटल स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई विश्वका विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा प्लेसमेन्ट गराउँदै आएका छन् । उनै भुसालसँग प्रदेश पोर्टलले गरेको पर्यटन संवादको सारः
तपाईंले होटलमा लेख्नुभएको छः ग्राहक सेवा विभाग होइन यो त व्यवहार हो । के इटहरीका होटल तथा हस्पिटालिटीका क्षेत्रमा यो ग्राहक सेवा विभाग मात्रै होइन व्यवहार हो भन्ने कुरा लागु भएको छ ?
– इटहरीमा आजकाल बाहिरबाट मान्छे आउने क्रम चाहिँ बढेको छ । तर यहाँ सर्भिस नबुझेको अवस्था छ । पाहुना आएपछि के कस्तो व्यवहार गर्ने र कुन पाहुनाको कसरी सेवा गर्ने भन्ने कुरा पर्यटनमा मुख्य कुरा हो । पर्यटनमैत्री सेवाकै कारणले पर्यटकहरू दोहोरिने भन्ने पनि छ । यद्यपि इटहरीमा पछिल्लो समयमा केही राम्रा परिवर्तन भने आएका छन् । यसको थप बिस्तारको लागि भने राम्रा टे«निङ संस्थाहरू, राम्रा ट्रेनरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका स्वागत, सत्कार, सेवा तथा परिकारका कुराहरू दिन भने केही बाँकी नै छ । होटल र हस्पिटालिटी पढेका विद्यार्थीहरू र सेवाप्रदायकहरूलाई ‘गु्रम’ गरेको अवस्थामा भने चाँडो राम्रा परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिनेछन् ।
तपाईंले इटहरीमा रहेर पर्यटनमा काम गरेको अनुभवका आधारमा इटहरीलाई गन्तव्य कि ट्रान्जिट पर्यटकीय केन्द्र मानेर पर्यटक इटहरी आउँछन् ?
– मेरो डेढ वर्षको अनुभवमा मैले भेटेका पाहुना र उनीहरूसँग गरिएको संवादका आधारमा इटहरीलाई गन्तव्य भन्दा ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएरै आउनेहरू धेरै छन् । इटहरीमै रात बिताउने गरीका गन्तव्य इटहरीमा छैनन् । तर, इटहरी भएर इलाम, भेडेटार, राजारानी, नमस्ते झरना, गुराँसको राजधानी भनिने तिनजुरे, मिल्के जलजले क्षेत्र, कोशी टप्पु, चतरा, वराहक्षेत्र आदि स्थानमा जाने पर्यटकहरू धेरै छन् ।
इटहरी ट्रान्जिट बनाएर पूर्वका विभिन्न स्थानमा जानेहरूका लागि बस्ने अत्याधुनिक र आरामदायी सेवा र सुविधा सहितका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको विकास गर्नुपर्छ । इटहरीमा एक रात बिताउँदा रमाउने तालतलैया, काव्यवाटिका, रामधुनी र धरान क्षेत्रका आकर्षणहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अब इटहरीलाई ट्रान्जिट मात्रै होइन गन्तव्य शहर पनि बनाउनुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी निकायले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले इटहरी केन्द्रित पूर्वको पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि के गर्न सक्छ र सरकारी निकायले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
– निजी क्षेत्रले प्रदेश एकका सबै पर्यटकीय क्षेत्रका सूचनाहरू व्यवस्थित तरिकाले दिन सक्नुपर्छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङका कामहरू गर्नुपर्छ ।
लगानी र जनशक्ति निर्माणका कामहरू निजी क्षेत्रले गर्न सक्छन् । इटहरीलाई पूर्वको पर्यटनको प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ । पूर्वका मुख्य गन्तव्यहरू, पर्यटकीय प्याकेजहरू, ¥याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, ट्रेकिङ, माउन्टेन बाइकिङ, जङ्गल सफारी अदिको सम्पूर्ण सुविधा र सूचनाहरू इटहरीबाटै दिने वातावरण ल्याउनुपर्छ ।
इटहरीले सीमावर्ति भारतीय राज्य विहार र पश्चिम बंगालका पर्यटकहरू तान्न के गर्न सक्छ ?
– भारतको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका मध्येका राज्यहरू विहार र पश्चिम बंगालका पर्यटकहरू इटहरीले तान्न सक्छ । इटहरीबाट विहारको सीमा पुग्न ३०–४० किलोमिटर मात्रै हो । यस्तै पश्चिम बंगालको सीमामा पुग्न पनि १ सय किलोमिटर भन्दा कम हो । त्यसैले भारतीय पर्यटकहरूलाई पूर्वी नेपालका विभिन्न पर्यटकीय प्याकेजहरू दिनलाई इटहरीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपालको प्राकृतिक तथा साहसिक पर्यटकीय उत्पादनहरू बेच्नलाई इटहरी राम्रो बिन्दु बन्न सक्छ । भारतमा मध्यम वर्ग तथा नवधनाढ्यहरू बढेकाले हामीले लाखौँ विहारी तथा पश्चिम बंगालका पर्यटकहरू तान्न सक्छौँ ।
अझ किमाथांका–जोगबनी सडक बनेको अवस्थामा त हामीले झनै राम्रो काम गर्न सक्छौँ । चीनका पर्यटकहरूलाई पनि इटहरीबाट पूर्वका विभिन्न प्याकेजहरू दिलाउन सक्छौँ । यसको लागि बाटोघाटो आदिका पूर्वाधारका कामहरू भने सरकारी तवरबाट गर्नैपर्छ ।
समग्रमा नेपाली पर्यटनमा सगरमाथा, पशुपतिनाथ र लुम्बिनीबाहेक अरु प्राकृतिक तथा धार्मिक गन्तव्यहरू कमै चर्चामा छन् । यसको लागि पूर्वले आफ्ना पर्यटकीय खुराकहरू के के बेच्न सक्छ ?
– पूर्वमा धेरै पर्यटकीय खुराकहरू छन् । विश्वका उच्च शिखरहरू सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंघा, ल्होत्से आदि पूर्वमै छन् । विश्वको सबैभन्दा होचो अरुण उपत्यकादेखि दक्षिण एसियाको चरा भण्डार भनिने कोशी टप्पु पनि पूर्वमै छन् ।
यस्तै, वराहक्षेत्र, प्राचीन हरिद्वार, विष्णुपादुका, रामधुनी, अर्जुनधारा, दन्तकाली, किचकबध, हलेसी, पाथिभरा आदि धार्मिक धरोहरहरू पनि पूर्वमै छन् । अरुण तथा तमोर ¥याफ्टिङ, धरान–भेडेटार प्याराग्लाइडिङ, धरान केन्द्रित पूर्वको प्याराग्लाइडिङ आदि सबै कामहरू इटहरीलाई केन्द्र बनाएरै दिन सकिन्छ ।
यी र यस्ता अन्य पर्यटकीय खुराकहरूले इटहरीकेन्द्रित पूर्वको पर्यटनमा थुप्रै कामहरू हुन सक्छन् ।